पुरुष पनि आफ्नो हेयर र स्कीनप्रति सचेत रहेको पाइन्छ : ब्युटिसियन जुली प्याकुरेल - www.biratsandesh.com
पुरुष पनि आफ्नो हेयर र स्कीनप्रति सचेत रहेको पाइन्छ : ब्युटिसियन जुली प्याकुरेल
ब्युटिसियन पेशामा कसरी लाग्नुभयो ?
पहिलोपटक एसएलसी दिएर आइब्रो बनाउन पार्लर गएकी थिएँ । सानो चिटिक्क परेको पार्लर, एकजना व्युटिसियन दिदी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मेरो आइब्रो बनाउँदा मलाई आफ्नै फेसमा परिवर्तन भएको लाग्यो । सही तरिकाले गरेको आइब्रो सेपले नै धेरै परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ फेसमा भन्ने कुरा थाहा पाएँ । त्यही बेलादेखि सोचेकी यो पेशामा आएर काम गर्दा आफू पनि राम्री हुन पाउने र अरुलाई पनि राम्री बनाउन पाउने । अरुलाई राम्री बनाउँदा आनन्द आउँदो रहेछ । यो पेशामा मानसम्मान र पैसा दुवै छ । अहिले आफूलाई यही पेशामा सन्तुष्ट पाएकी छु ।
नेपालमा खासगरी विराटनगरमा ब्युटिसिनयनको अवस्था कस्तो छ ।
नेपालमा खासगरी विराटनगरमा ब्युटिसियनको अवस्थालाई हेर्दा अहिले त राम्रो र चित्त बुभ्mदो नै छ । किनकि अब पहिले जस्तो समय रहेन कि कुनै पनि ठूलो विवाह समारोह, पाटी, उत्सव, चाडपर्वमा पनि आफैंले जानी या नजानी महिला दिदीबहिनीहरूले शृंगार आफैंले गरेर जानुपर्ने । अहिले यस्तो समारोहका लागि तयार हुनका लागि पार्लरमै हाम्रा दिदीबहिनीहरू आउन रुचाउनु हुन्छ । हरेक दिदीबहिनीलाई लाग्छ कि राम्री देखुँ र कहींकतै जाँदा सिम्पल तर सही ढंगको शृंगार अनुहारमा होस्, साथै समयको मागअनुसार उहाँहरू फेसियल, हेयर कट, मेकअप गर्न रुचाउनुहुन्छ र यसरी हेर्दा अहिले पहिलेको भन्दा यो पेशामा हामीजस्ता ब्युटिसियन व्यस्त हुन थालेका छौं ।
पहिला महिलाको मात्र थियो, अहिले पुरुषको पनि खोल्नुभयो किन ?
म एउटा ब्युटिसियन हुनुको साथै फ्रि टाइममा एफएममा पनि सौन्दर्यसम्बन्धी प्रोग्राम चलाउँथे र यही क्रममा कहिले स्रोताहरूसँग प्रश्न उत्तर हुन्थ्यो, कहिले कुनै एक विशेष सौन्दर्यको विषयलाई लिएर कुराकानी छलफल हुन्थ्यो । सौन्दर्यसम्बन्धी प्रोगाम हुने भएकाले प्रश्न सोध्ने क्रममा महिला स्रोता सँगसँगै पुरुष दाजुभाइले पनि आफ्नो स्कीन, हेयरको प्रोब्लम भन्नु हुन्थ्यो र म उहाँहरूलाई समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्थे । यसरी प्रोगाम गर्दा दाजुभाइले एफएममा मात्र मसँग बोल्न वा सोध्न पाउनुहुन्थ्यो, अरु बेला मसँग भेट्न वा बोल्न पाउनु हुन्थेन किनकि मेरो पार्लरमा पहिले दिदीबहिनीहरूलाई मात्र सेवा प्रदान गर्ने गरेको थियो । यसरी एफएमको प्रोग्राममा मैले बोल्दा धेरै दाजुभाइले सोध्नु भयो, ‘स्कीन र हेयरको प्रोब्लम हामीलाई पनि हुन्छ, यसको ट्रिटमेन्ट गर्न कहाँ जाने ?’ अब यसका लागि कुनै दक्ष ब्युटिसियनकोमा नै जानुपर्ने र अर्को कुरा स्कीन र हेयर ट्रिटमेन्टमा मैले दिल्ली ब्ीएक् एकेडेमीबाट डिप्लोमा गरेकी हुनाले मलाई यसको राम्रो ज्ञान भएको हुनाले दिदीबहिनी सँगसँगै दाजुभाइलाई पनि स्कीन र हेयरको हरेक समस्या समाधानका लागि पार्लरमा पुरुषका लागि पनि यो सुविधा दिनुपर्ने सोचें र पहिला महिलाको मात्र र अहिले पुरुषका लागि पनि सलुन खोलें ।
हाम्रो जस्तो समाजमा पुरुष आउलान् त ?
स्कीन प्रोब्लम, हेयर प्रोब्लमलाई मैले आफ्नो ब्युटी क्लिनिकमा सजिलै ट्रिटमेन्ट गरी समस्या समाप्त पार्न सक्छु भने यो सुविधा महिलालाई दिनुको साथै पुरुषलाई पनि यो सुविधा दिनेतर्फ सोचियो र अर्को कुरा हाम्रो समाजमा पुरुष आउलान् सोध्नुभयो, राम्रो हुनुका लागि र समयअनुसार फेशन गर्नका लागि महिला सँगसँगै पुरुष पनि लालायित रहन्छन् । र, दाजुभाइ पनि आउनुहुन्छ फेशियल, ब्लीज, हेयर कलर, हेयर हाइलाइट, ट्रिटमेन्ट गर्न । मैले ब्युटिसियन कोर्स गर्न लाग्दा कहींकतै कसेले पनि यो भनेनन् यो पेशामा लाग्दा महिलालाई मात्र राम्रो बनाउने या महिलाको मात्र सौन्दर्य समस्या समाधान गर्ने । पुरुष पनि अहिले आफ्नो हेयर र स्कीनप्रति सचेत रहेको पाइन्छ ।
यो पेशामा प्रतिस्पर्धा छ, कस्तो छ ?
हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भएको जस्तै यस क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा छ र यो राम्रो हो । प्रतिस्पर्धा हुँदा कामलाई अझ राम्रो बनाउनेतिर सोचिन्छ र ग्राहकलाई अझ सहज हुनेगरी सुविधा सहुलियत दिइन्छ ।
यो पेशामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भन्छन् नि हो ?
यो पेशामा अहिले आएर दक्ष मानिनेकोमा जानुपर्छ भन्ने सोच आएको हुनाले अब त नयाँहरूले यो पेशामा आउनुभन्दा पहिला आफूलाई राम्ररी यसका लागि तयार पारेर नै आउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको छ र राम्रो ट्रेनिङ लिएर नै मात्र यस्तो ब्युटी क्लिनिक या पार्लर सलुन खोल्छन् । साथै अहिलेको ग्राहकवर्गमा पनि यो कुराको जानकारी छ कि दक्षकोमा नै जानु राम्रो हो । पहिलेको र अहिलेको टे«निङमा धेरै परिवर्तन भएको पाइन्छ । पहिले सिम्पल फेसियल गर्दा अक्सिजन, ओजोन, अल्ट्रासोनिक जस्तो अति नै आवश्यक मानिने मेसिनहरूको प्रयोग हुन्थेन । तर अहिले त्यस्तो छैन अब हरेक फेशियलमा सिम्पल होस् या स्पेशल ग्राहकहरूले ओजोन, अल्ट्रासोनिक, अक्सिजन सँगै गरिएको फेशियल गर्न रुचाउनु हुन्छ । यसरी भन्नु पर्दा अब र अहिलेको समयमा दक्ष ब्युटिसियनहरू नै पाउनु हुन्छ ।
धेरै महँगो हुन्छ भन्छन् नि ब्युटिपार्लरमा जानु ?
पाँच सयदेखि पनि राम्रो ब्राण्डकै फेशियल सुरु छ, जसमा हामीले ओजोन र ग्यालवेनिक पनि प्रयोग गर्छौं अब तपाईं नै भन्नुहोस् कहाँ र कसरी पार्लरमा जानु महँगो भयो र ? सौन्दर्य र स्वास्थ्यका लागि सब सचेत रहेको मैले बुझेकी छु । जस्तै स्वस्थ हुनुका लागि मानिसमा खानपिनदेखि दैनिकी दिनचर्चालाई लिएर जागरुकता भएको पाइन्छ । त्यस्तै नै सौन्दर्यका लागि पनि सचेत भएको देखिन्छ र अलिक राम्रो खोज्ने हो भने केही एस्पेन्सिप त पर्छ नै तर पनि म यो भन्न खोजकी होइन पार्लर सर्भिस महँगो या पार्लर जानु महँगो पर्छ । तपाईं आफ्नो पकेटको बजेटअनुसार नै काम गराउन सक्नु हुन्छ । अर्को कुरा पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छु हामी नेपालीले यो पार्लरको सर्भिस धेरै नै सस्तो र राम्रो पाइरहेका छौं नेपालमा । नेपाल जति पार्लर दर सस्तो कहीं कुनै पनि देशमा पाइन्न, नजिकै छिमेकी देश भारतको कुनै पनि राम्रो पार्लरमा जाँदा जति त्यहाँ शुल्क चर्को लिइन्छ त्यो हेर्दा त हाम्रो नेपालमा धेरै नै सहुलियत दर रहेको पाइन्छ जसलाई हरेक वर्गकाले गर्न सक्छन् ।
महिला पुरुष दुवैलाई तपाईंको पार्लर एण्ड सलुनमा सेवा दिने हुनाले अहिले धेरै नै व्यस्तता बढेको हुनाले घर, परिवार र विजनेत दुवैलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
यो पेशामा लागेको १० वर्ष भयो । घर, नानी, बाबुलाई हेर्दै मैले सही ढंगले हेरविचार या ध्यान पु¥याएँ । श्रीमानलाई कहिल्यै पनि यो भन्ने मौका दिइन कि मैले बाहिर विजनेस गर्दा घर या छोराछोरीको हेरविचारमा लापरबाही गरें, हरेक दिन बच्चालाई खाजा खुवाउन घर पुग्थें, कति साथीसंगीले भन्छिन् ‘किन सधैं घर नै जानुपर्ने खाजा खुवाउन, रेडिमेट खाजा राख्दा केटाकेटीले खाइहाल्छन्’ तर मनले मान्दैन र पार्लरमा जति नै कस्टमर हुँदा पनि स्टाफलाई सब अह्राएर घर पुग्थें बच्चाका लागि खाजा खुवाएर फेरि पार्लर फर्कन्थें । यो सब मेरा श्रीमानले हेर्नु भएकोले उहाँ पनि बुभ्mनु भएको छ मैले सबैतिर ब्यालेन्स मिलाएकी छु भेनर । म टीभीको सिरियल हेरेर या यत्तिकै कतै घुमेर टाइम खेर फालने स्वास्नी होइन, काम गर्ने, मेहनत गर्ने बानी छ । श्रीमानको कमाइलाई आफूमा खर्च गर्नुभन्दा पनि आफूले गरेको मेहनतबाट आएको रकमले उहााको जिम्मेवारीलाई सजिलो बनाइदिएकी छु । शान्त मनले कुनै पनि काम गर्दा सबैतिर भ्याइन्छ । मेरा लागि विजनेसभन्दा पनि महत्वपूर्ण मेरा परिवार हुन्, परिवारका लागि उनीहरूको खुसीका लागि मैले हरेक कुरालाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेकी छु । यसैले पनि होला मैले परिवार र विजनेसमा सन्तुलन बनाइराखेकी छु ।
महिला पुरुष दुवै आउने भएकाले सहज या असहज कसले गर्दा हुन्छ या लाग्छ ?
हामी आफ्नो कामप्रति इमान्दार हुन्छौं, काम भनेको काम हो, पुरुष र महिला भनेर सोच्दैनौं । एउटा डाक्टरले इलाज गर्दा महिला या पुरुष हेरेर काम गर्दैन हामी ब्युनिसियन पनि यस्तै हौं । मेरो पार्लर या सलुनमा जति महिला सभ्य व्यवहार देखाउनु हुन्छ त्यति नै पुरुष ग्राहकले पनि सभ्य व्यवहार देखाको पाएकी छु, काम गराएर जानु हुन्छ । सहज नै पाएकी छु । कस्टमरलाई कामसँग मतलब हुन्छ ।
तपाईंको पार्लरमा या सलुनमा के के सेवा छ पुरुषलाई दिने ?
फेसियलमा राम्रो मानिने हुनाले पुरुषका लागि मेरो पार्लरमा फेसियल, ब्लीच, हेयर स्पा, स्कीन ट्रिटमेन्ट, हेयर ट्रिटमेन्ट, कलर, हाइलाइट स्टे«ट छन् ।
प्रस्तुति: मीनकुमार नवोदित
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २१:४७
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार भारत जादैँ
राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता पाएको भलिबल अब राष्ट्रिय खेल हुने नहुनेमा अन्योल
ओडिआई स्ट्याटस पाउँदा नेपाललाई ३ फाइदा
यो वर्ष मनसुन औसतभन्दा बढी हुने, बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्न सक्ने पूर्वानुमान
विराट ट्रेड एक्स्पोमा आयोजकको अपेक्षाभन्दा बढी कारोबार
Four years of deadly earthquake
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल को अधिवेशन सम्पन्न
एलपी ग्यास चुहावट भएर आगगाली हुँदा झापामा छ जना घाइते